Daawooyinka Guriga ee Loogu Talo Galay Qulqulka iyo Cuncunka - Talooyin ku Saabsan Ragga Quruxda Badan | Ragga Caqliga leh
Alicia tomero | 06/08/2021 10:00 | Daryeelka shaqsiyeed, Caafimaadka
Sidee ugu faraxsan yahay dandruff markaan maskaxda ku hayno waxayna na siin kartaa muuqaalkaas aan la rabin. Ka fog ka mid noqoshada wax aan fiicnayn, waa inaan maanka ku haynaa taas waxaa loola jeedaa isbeddel ku dhaca madaxa marka maqaarku diiriyo.
Waxa ugu caajiska badan ee ku dhaca dandruff waa marka cuncun aan fiicnayn ayaa dhacaya, wax yaraynaya qaabka iyo joogitaanka dandruff -ka wax badan. Ma wanaagsana in madaxa la xoqo mana aha caado rasmi ah, maadaama qolofku garbahayaga ku daadanayo oo joogitaankoodu aad buu u calaamadsan yahay.
1 Waa maxay sababta qolofluhu u soo baxaan?
2 Daawooyinka guriga ee qolofta iyo cuncunka
2.1 Saliida shaaha
2.3 Liin dhanaan
2.4 Saliida qumbaha
2.5 Tufaax cider tufaax
2.7 Dubo soda
Waa maxay sababta qolofluhu u soo baxaan?
Xummaddu sidoo kale waa loo yaqaan pityriasis. Maqaarkayagu wuxuu leeyahay qaab u gaar ah oo ku duubma maqaarka maqaarka. Laakiin marka habka eryidda maqaarka dhintay ay aad uga gaabiso, waxay noqotaa a uruurinta xad -dhaafka ah ee unugyada dhintay taas oo keenta pityriasis ama dandruff.
Xaaladdiisu waxay ku timaadaa natiijo ahaan xanaaq badan oo ka mid ah alaabta kiimikadas kuwaas oo taabanaya madaxayaga. Arrin kale oo saamayn ku yeelan karta waa markaad ku nooshahay aag aad u qoyan, maadaama ay sababto muuqaalka fungus oo adkaynaya in la diiriyo.
Muuqaalkiisa ayaa sidoo kale muuqda marxaladda baaluqnimada wuxuuna u jilcaa marka qofku sii weynaado. Isbeddelkan wuxuu la xiriiri karaa dhaqdhaqaaqa hormoonnada wuxuuna ku jiri karaa heerkan. Si kastaba ha ahaatee, waxaa jira dawooyin badan si aan ula dagaallano oo waxaan haysannaa alaab aan tiro lahayn iyo shaamboo si aan u awoodno inaan u dabaqno oo u daaweyno. Haddii aad rabto inaad isticmaasho daawooyinka guriga oo si dabiici ah u samee waxaad isticmaali kartaa qaar ka mid ah talooyinkayaga.
Cuntada ayaa sidoo kale la tixgeliyaa arrin u roon muuqaalkiisa. Cunto liidata oo hodan ku ah karbohaydraytyada iyo dufanka ayaa shaki la'aan kordhin doona xoogeeda iyo muddadeeda. Haddii aan maanka ku hayno qandho oo ay weheliso cuncun weyn, waxaan wajahaynaa dhibaato guduudasho iyo muuqaalka dermatitis seborrheic.
Saliiddan ayaa aad loogu qaddariyaa abuurista in ka badan hal daaweyn iyo daaweyn madaxyadeena. Leedahay hanti anti-bararka, antifungal iyo bakteeriyada. Haddii waxa aad doonaysaa ay tahay inaad cuncunkaaga dejiso, dhawr dhibic madaxa ka mari oo cuncunkaa dhibsanaya gebi ahaanba wuu dejin doonaa. Khasaaraha kaliya ayaa ah taas Maaha dawo lagula dagaallamo dandruff, laakiin cuncunkeeda, waana inaadan ku xadgudbin saliiddan si aysan uga tagin haraaga saliidda leh.
Warshadani waxay leedahay guryo badan oo daaweyn aan tiro lahayn. Waa bakteeriyada iyo antifungal Sidaa darteed, waxay yareyneysaa jiritaanka fangaska oo ku jira sameynta dandruff. Waa inaan tuurno laba qaado oo ah aloe vera gel oo madaxa ku marmari duugis dabacsan. Waa laga tagi karaa jilitaanka Daqiiqado 20 oo waxaa jira xitaa kuwa u oggolaaday inay wax ka qabato habeenkii oo dhan. Ka dib, waa in lagu maydhaa biyo laguna nadiifiyaa shaambo khafiif ah. Waxaa jira soo noqnoqoshada daaweyntan ugu yaraan biweekly wuxuuna damaanad qaadayaa in la waayo qolofta, cuncunka iyo waliba quudinta iyo waraabinta timaha.
Midhahan ayaa sidoo kale leh faa'iidooyin iyo sifooyin badan. Iyaga guryaha antifungal Waxay gacan ka geysan doontaa baabi'inta muuqaalka fangaska iyo mahadnaqa fitamiin C -ga waxay dejin doontaa joogitaanka qolofta. Waa inaan tuujin liin oo aan ku qooyo suuf, halkaas oo aan ku xajin doono dhakada. Ha nasto 10 daqiiqo oo biyo raaci.
Wax badan oo ka mid ah faa'iidooyinka saliidda qumbaha ayaa la muujiyaa mar kasta. Aad bay u wanaagsan tahay in meesha laga saaro cuncunka tan iyo wuxuu dhawraa qoyaanka madaxa. Qaybteeda, lauric acid, ayaa leh guryaha antifungal yaraynta qolofta iyo baabi'inta bakteeriyada. Waxay kaloo u fiican tahay nafaqada timaha.
Waxaad u isticmaali kartaa maaskaro mar ama laba jeer toddobaadkii. Isku qas saddex qaado oo saliid ah oo leh casiirka nus liin ah, mari madaxa, si fudud u duug oo ka tag 20 daqiiqo. Ka dibna ku saar saabuun iyo biyo khafiif ah.
Waxyaabaha ay ka kooban tahay aashitada waxay u adeegtaa sidii saaxiib wanaagsan oo lagula dagaallamo fangaska iyo bakteeriyada. Codsigeeda ayaa gacan ka geysan doona in si fiican loo nadiifiyo timaha timaha waxayna yarayn doontaa cuncunka uu keeno qolofta. Si aad u dalbato isku dar ¼ koob oo khal ah nus koob oo biyo ah timahana ku biyo raaci. Si aan wax ur ah loo soo saarin waa inaad timuhu si buuxda u engegaan.
Xididkani wuu leeyahay guryaha bakteeriyada iyo anti-bararka. Tuuji sinjibiisha oo mari madaxa. Ha ficil 30 daqiiqo saacad kadibna timaha si fiican u biyo raaci. Ma ogtahay in sinjibiishu sidoo kale leedahay hanti laga hortago timo lumis?
Bicarbonate waxay daryeeshaa caafimaadka timaha, baabi'iyaa fangaska wuxuuna si qoto dheer u nadiifiyaa madaxa. Isku darka 2 qaado oo soodhaha ah, oo qaado qaado oo liin dhanaan ah iyo 3 qaado oo biyo ah. Codso adoo ku adkeynaya aagga guriga oo si tartiib ah u duug. Iska daa 15 daqiiqo ka dibna ku raaci biyo qabow. Waxaad codsan kartaa dhejisyadaan laba ama saddex jeer toddobaadkii oo si tartiib tartiib ah ayaad u yareyn doontaa qolofta.
Talo ahaan, mar walba isticmaal faahfaahinta iyo tirada aan tusno. Ha isku dayin isticmaal wax ka badan inta lagu taliyey ama garaac waqtiyada, maadaama aad ka xanaajin karto madaxa. Sidoo kale, ha isku dayin inaad isku darto dhowr waxyaabood oo ka mid ah kuwa lagu sifeeyay haddii aad keento saameyn isku mid ah. Waxaan rajaynayaa in dhammaan daawooyinkan dabiiciga ah ay leeyihiin saamayn gaar ah.
Wadada buuxda ee maqaalka: Ragga Stylish » Daryeelka shaqsiyeed » Daawooyinka guriga ee qolofta iyo cuncunka
Sida loo shaabadeeyo shaar bilaa bir ah
Sida loo soo jiito